अन्जुको यो आवाज ,सायद सबै खेलकर्मीको हो « KhelkudNews.com
Published On : 23 July, 2020 12:40 pm
एक खेलकर्मीले तय गरेको लामो यात्रा । खेलाडी जीवन, त्यस पछि प्रशिक्षक । तर, त्यो प्रशिक्षक जीवन सरकारी जागिर होइन । आफ्नो खेलप्रतिको लगावका कारण रहेको सक्रियता र प्रतिबद्धताका कारण सक्रिय प्रशिक्षण कार्य । उसको मनमा के के प्रश्न उठ्छ होला ?
धेरै खेलकर्मीको मनमा सामान्यतया उठ्ने उही खाले सवाल हुन् । खेलाडी जीवन हुँदा अझ भनौँ राष्ट्रिय टोलीमा रहँदाको समयमा सोच्ने एउटै कुरा हो , “भौतिक संरचना तथा नियमित र वैज्ञानिक प्रशिक्षण भए हामी के कम । हामी कोहीसँग पनि सजिलै हार्दैनौ । ” हो, यस्ता कुरा भलिबलकी राष्ट्रिय टोलीकी कप्तान अन्जु श्रेष्ठले पनि सोच्ने गर्थिन् ।
खेलाडी जीवन पछि जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रकी प्रशिक्षक भएकी उनले अझ धेरै कुरा बुझ्न पाइन् । खेलाडी जीवन पछि जीवन आधारको माध्यम के ? सामाजिक परिचय के ? हो यस्ता अनेकौँ प्रश्न उनका मनमा नतेर्सिएका होइनन् । पुराना भलिबल खेलाडीहरूलाई जम्मा गर्दै उनले पुनर्मिलन अभियान पनि सुरु गर्न भ्याइन् । आफू आफू बिचको भेटघाट र जमघटले पनि ती सबै खेलाडीलाई हामी पनि केही हौ भन्ने आत्मसम्मान बढायो ।
त्यसो त नेपाली खेलकुदमा प्रस्ट तथ्याङ्कको अभाव छ । तर पनि विगतलाई सम्झन त पर्ने हो । उनले भागेको एउटा कुरा हो, नेपालमा भलिबल राष्ट्रिय खेल भएको छ । नाम र फेम छ । अन्य खेलमा पनि होला । तर, यहाँसम्मको यात्रामा आइपुग्दा धेरैको त्याग, तपस्या र पसिनाले यो क्षेत्र सिञ्चित छ । यसलाई सम्झने काम पनि गर्ने की नगर्ने ? एउटा पदकधारी खेलाडीले सम्मान पाउँछ , तर, त्यहाँ सम्मको यात्रा तय गर्न धेरैको भूमिका रहन्छ । उसको सुरुवाती दिन देखि पछिल्लो समयसम्मका प्रशिक्षक, उ आबद्ध भएका विभिन्न टोली र उसले खेल्ने गरेका सहकर्मी र प्रतिस्पर्धी पनि । यी सबैलाई व्यवस्थित सम्बोधन गर्ने संरचना नै व्यवसायीकरण हो । नेपालको खेलकुदमा साँच्चै त्यो छ त ?
अन्जुको मनमा धेरै वर्ष देखि उठ्ने गरेका यस्ता अनेकन् प्रश्न छन् । यही बिचमा सरकारले खुल्ला दरखास्त आहन गरे पछि उनले सोचिन्, “आफ्नो पनि योग्यता पुरा भए पछि ती आवाजलाई सम्बोधन गर्न आफै किन त्यहाँ पुग्न प्रयास नगर्ने ? ” यही सोचाइका साथ उनले निवेदन दिइन् । भौतिक संरचनाको विकास, व्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रशिक्षण , पूर्ण व्यवसायीकरण र हरेक खेलकर्मीको सम्मानजनक जीवन लगायतका कुरामा उनी प्रस्ट भइन् । यसैका आधारित भएर कार्यनीति पनि बुझाइ सकेकी छिन् । उनी आफैले यो सबै कुरा मनन गरेकै कारण यसको कार्यान्वयनमा पनि प्रतिवृद्धताको शङ्का छैन ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव पदका लागि निवेदन दिने २७ मध्य अन्जु सहित भलिबल सङ्घकै पूर्व उपाध्यक्ष लिल बहादुर थापा र निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवालको नाम सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको छ । यी मध्य नै एक जना सदस्य सचिव हुने छन् ।उनको कथन छ “यो मेरो मात्र कुरा होइन सम्पूर्ण खेलाडीहरूको हो । मेरो प्रयासले सम्पूर्ण खेलाडीका लागि म केही हुँ भन्ने र आफ्नो योग्यता अनुसारको दावा गर्ने बाटो खुला भएको छ , ”उनी अगाडी भन्छिन् , “ यो जिम्मेवारी पाउँदा राम्रो सँग चलाउँला । पाइन भने मैले भागेका र देखेका सम्पूर्ण खेलकर्मीको समस्याका बारे आवाज उठाउन आत्मबल त सधैँका लागि मिलेकै छ । ”
उनी आफ्नो नाम सिफारिस गर्ने सिफारिस समिति तथा यो ऐन ल्याएर खेलाडीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिएकोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रति आभार व्यक्त गर्छिन् । साथै सधैँ सम्पूर्ण खेलकर्मीको हितमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।